नोक्सान हुनसाथ बंगालले दार्जीलिङ छोड्छः हर्कबहादुर - प्रतिविम्ब.com %
दार्जीलिङ, फीचर्ड, राजनीति, समाचार
पहाड़मा झण्डै झण्डै राष्ट्रपति शासन लागे जस्तै छः डा. सिन्हा
दार्जीलिङ, 22 अप्रेल
डा. हर्कबहादुर छेत्रीले भने-जुन दिन बंगाललाई दार्जीलिङबाट नोक्सान हुन्छ, त्यसै दिन बंगालले दार्जीलिङ छोड्छ। डा. गोकुल सिन्हाले भने-दार्जीलिङ पहाड़मा झण्डै झण्डै राष्ट्रपति शासन लागे जस्तै छ।
सन्दर्भ थियो-अलग राज्य गोर्खाल्यान्ड। गोर्खाल्यान्ड राज्य गठनकै मागमा आजभन्दा6महीनाअघि मात्रै गठन भएको राष्ट्रिय गोर्खाल्यान्ड कमिटीले आज यहाँको गोर्खा दुःख निवारक सम्मेलन भवनमा एक कार्यक्रमको आयोजना गरेको थियो। यस कार्यक्रममा डा. गोकुल सिन्हा मुख्य अतिथिका रूपमा उपस्थित भएका थिए भने विभिन्न राजनैतिक पार्टीहरूका प्रतिनिधिहरू पनि यहाँ भेला भएका थिए। जसमा जाप अध्यक्ष डा. हर्कबहादुर छेत्री, क्रामाकपा अध्यक्ष आरबी राई. गोजमुमो नेता एवं खरसाङका विधायक डा. रोहित शर्मा आदिको पनि यस कार्यक्रममा विशेष उपस्थिति रहेको थियो।
एनजीसी (नेशनल गोर्खाल्यान्ड कमिटी)-का अध्यक्ष सेवानिवृत्त ले. जेनरल शक्ति गुरूङको अध्यक्षतामा आयोजना भएको यस कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा डा. सिन्हाले व्यङ्ग्यात्मक ढङ्गमा भने-म हिँड़ेको बाटै बाङ्गो भने जस्तै लागिरहेको छ अहिले। वर्तमान समयमा दार्जीलिङ पहाड़मा झण्डै झण्डै राष्ट्रपति शासन लागे जस्तै भएको छ। जनसभा गर्न नपाउनुबाट यहाँ इमर्जेन्सी लागू भए जस्तो पनि लागिरहेको छ। न यहाँ जीटीए निर्वाचित नेताहरूले चलाइरहेका छन्, न पञ्चायतनै निर्वाचित सदस्यहरूले चलाइरहेका छन्। यसैले यहाँ प्रेसिडेन्ट रूल लागू छ जस्तो छ।
यसैबीच, उनले दार्जीलिङ पहाड़का राजनैतिक नेताहरूलाई सुगौली सन्धि मात्रै होइन, तितलीया सन्धिको पनि कुरा उठाउने आह्वान गरे। उनको भनाई छ-दार्जीलिङ पहाड़का नेताहरूले सुगौली सन्धिको मात्रै कुरा गर्ने गरेका छन्। तर सुगौली सन्धिपछि तितलीया सन्धि पनि भएको छ, जसले भारतमा बसोबासो गर्ने गोर्खाहरूलाई पक्का भारतीय हो भन्ने प्रमाण गर्छ। उनले गोर्खाल्यान्डको लागि आवाज उठेको 30 देखि 35 वर्ष मात्रै भयो भन्ने बताउँदै बंगालबाट छुट्टिन चाहेको भने 110 वर्षभन्दा अधिक समय भएको बताए। यसैले जुनै नाममा माग उठे पनि उद्देश्य बंगालबाट अलग हुनु हो, यसैको लागि एनजीसीको पहल स्वागतयोग्य छ।
यसरीनै दर्शक दीर्घामा रहेका जाप अध्यक्ष डा. हर्कबहादुर छेत्रीले पनि कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै बंगाललाई दार्जीलिङबाट नाफा भइरहेको वा दार्जीलिङ पहाड़बाट व्यापक मात्रामा राजस्व संग्रह हुने भएको कारणनै छोड़्न नमानेको आरोप लगाए। उनले भने-गत वर्ष भएको आन्दोलनको समय राज्य सरकारले एक बयान जारी गरेर भनेको थियो, 10 दिन पहाड़ बन्द हुँदा राज्य सरकारलाई 150 करोडको घाटा भयो। यसमा लगभग 20 करोड सरकारी सम्पत्ति तोडफोड र भष्म बनाइएको हिसाब पनि सामेल थियो। यसो हुँदा पनि दार्जीलिङ पहाडबाट 10 दिनमा सरकारलाई 130 करोडको राजस्व जान्छ भन्ने स्वयं सरकारको हिसाब थियो। तब दार्जीलिङ पहाडबाट 1 महीना वा 1 वर्षमा राज्यलाई कति राजस्व जान्छ, त्यो स्पष्ट हुन्छ। तर दार्जीलिङ पहाडको लागि वर्षमा 200 करोड पनि दिइँदैन। यसैले बंगालले दार्जीलिङ पहाड छोड्न चाहँदैन, तर जुन दिन दार्जीलिङबाट नाफाको साटो नोक्सान हुन्छ, त्यसै दिन बंगालले दार्जीलिङलाई छोड्नेछ।
यसैबीच, उनले दार्जीलिङ पहाडलाई आज अभिभावकको आवश्यकता छ भन्ने बताउँदै एनजीसीले अभिभावकको भूमिका निर्वाह गर्छ भन्ने आशा व्यक्त गरे।
दार्जीलिङ शहरमा नयाँ रिकर्ड, दिउँसो एउटै फ्याँकिएन मैला
वाजपेयीको निधनमा सातदिन राष्ट्रव्यापी शोक दिवस पालन गरिने
ओरियन्टको निर्माणाधीन परिसरमा माटो धस्किएर एकजना मृत्यु
मैत्री फूटबल खेल खेल्न दार्जीलिङका खेलाड़ीहरू जर्मनी लाने योजना
प्राथमिक शिक्षाको सुधार गर्न प्रशिक्षितहरूलाई नियुक्ति गर्नुपर्छ – गोर्खा बेरोजार प्रशिक्षित शिक्षक सङ्गठन
राष्ट्रिय पोषण दिवस सम्पन्न
23 घर गोरामुमो गोजमुमोमा सामेल
कालेबुङमा लिम्बु सांस्कृतिक भेला सम्पन्न
रेलवे बस सेवा पहाड़को पर्यटनको निम्ति लाभदायक
शहीद दिवस गोजमुमोको एक्टिङः मन घिसिङ
दार्जीलिङको बस स्ट्याण्ड नयाँ बनाइने
जनताले हाम्रो जनमत देखाइदिए विपक्षीहरूले अब आफ्नो देखाउन्- आलोक कान्तमणि थुलुङ